Teeknooloojiin ragaa barnoota sirrii mirkaneessuu hojiirra ooluufi – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Teeknooloojiin ragaa barnoota sirrii mirkaneessuu hojiirra ooluufi
On Feb 6, 2021 103
Finfinnee, Amajjii 29, 2013 (FBC)-Teeknooloojiin ragaa barattoota dhaabbilee barnootaa mootummaa fi dhuunfatti eebbifamaniif sirriin ta’uusa mirkaneessuu hojiirra ooluufi.
Daayreektarri olaanaa Ejansii qulqullinaa barnoota sadarkaa olaanoo Dooktar Andu’aaleem Adimaasee Faanaa Broodkaasiting Koorporeetif akka ibsanitti, hojimanni kun dhaabbiilee fi namoonni dhuunfa hojjettoota mindeessuuf ragaa sobaatin akka hin gowwamfamneef ni gargaraa.
Ityoophiyaatti yeroodha gara yerootti dabala kan dhufee ragaan sobaa fi dogogoraa sirrii ta’e adda baasuuf rakkoo uumaa tureera.
Yeroo amma kana garuu dhaabbilee garagaraa waliin hariiroo uumuun ragaa teeknooloojiin deeggaramee qaama barbaaduf laachuuf hojiiwwan xumuramuu ibsaniiru.
Hojiicha eegalchiisuufis hojjettoonni eejansichaa leenjii ga’aa fudhachuu ibsaniiru.
Itti gaafatamummaa seeraa akka qabattufis Abbaa Alangaa Waliigalaa, Komishinii Poolisii Federaalaa, Komishinii Farra Malaamaltummaa, Mana Murtii Waliigalaa fi Ministeera Teeknooloojii fi Innooveeshinii akkasuumas Eejansii Odeeffannoo fi Nageenyaa waliin hojjetama jira jedhaniiru.
Hojiiwwan kunneen xumuramuun dhiyeenyaatti hojii kan eegalan ta’uus ibsaniiru.
Sisaay Geetinnatu gabaase
Feesbuukiin hidhattoonni Awustaraaliyaa odeeffannoo akka hin hordofnee fi akka itti…
Duulli Twiitara Gamtaan Ityoophiyaaf jedhu gaggeefame
Yuunvarsiitichi cuuciwwan Qurxummii kuma 80 ol horsiisuun qonnaan bultoota adda…
Teeknooloojii dhibee biqiltoota fakkii qofaan adda baasu
Feesbuukiin hidhattoonni Awustaraaliyaa odeeffannoo akka hin…
Yuunvarsiitichi cuuciwwan Qurxummii kuma 80 ol horsiisuun…